PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ပြည်သူ့ကြားဖြတ် အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေး (NCUB) မဟာဗျူဟာ ချမှတ် .
ပြည်သူ့ကြားဖြတ် အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေး (NCUB) မဟာဗျူဟာ ချမှတ် .
စစ်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်အုပ်စုဖြုတ်ချရေး တိုက်ပွဲနှင့်အတူ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အခြေခံသော ပြည်သူ့ကြားဖြတ် အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေးကို ဦးတည်သည့် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ် ရည်မှန်းချက် (၁၃) ခု ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB)က ယမန်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါ မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်းစဉ် ရည်မှန်းချက်ကို NCUB ၏ န၀မအကြိမ်မြောက် ညီလာခံတွင် တညီတညွှတ် တည်း သဘောတူ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ညီလာခံတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
အဖြစ် ရွေးကောက် ခံရသူ ဦးအောင်မိုးဇော်က ကေအိုင်စီကို ယခုလို ပြောသည်။
NCUB ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်သူ ဦးအောင်မိုးဇော်ကလည်း “ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ဦးတည်ချက် (၄) ရပ် ကိုလည်း ကျနော်တို့ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဦးတည်ချက် အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်လက်ရပ်တည် သွားမယ် ဆိုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ညီလာခံက ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ရေးကိုမူ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းလည်း NCUB ဒု-ဥက္ကဌ (၂) ရွေးကောက်ခံရသူ ပဒိုစောအားတိုးက ပြောဆိုသည်။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဆိုပါ ညီလာခံတွင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၆၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
NUCB ၏ န၀မ အကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ကြေညာချက်ထဲတွင်မူ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်ကို ဆက်လက် ဆုပ်ကိုင်ထားကြောင်း၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို ငြင်းဆန်ပြီး ကြံ့ကြံ့ခံ ရပ်တည်နေသည့် အပစ်ရပ် အဖွဲ့များကို ထောက်ခံဂုဏ်ပြုကြောင်း၊ နအဖ၏ စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မှုအတွက် ကုလ သမဂ္ဂမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် ထောက်ခံကြောင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျသည်အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယကများအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော၊ ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘော (ဥက္ကဌ)၊ ဦးဗိုလ်သောင်း (ဒုဥက္ကဌ-၁)၊ ပဒိုစောအားတိုး (ဒုဥက္ကဌ-၂)၊ ဒေါ်စန်းစန်း (ဒုဥက္ကဌ-၃)တို့ ပါဝင်သည့် သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးနှင့် ဦးမောင်မောင် (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးအောင်မိုးဇော် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၁)၊ ဦးမြင့်သိဏ်း (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၂)တို့ ပါဝင်သည့် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ၉ ဦးကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
NUCB ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့၊ မာနယ်ပလောတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ အချိန်၌ မြန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အပါအ၀င် ကရင်၊ ချင်း၊ ပအို့ဝ်၊ ပလောင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ လားဟူနှင့် ‘၀’ စသည့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတို့ ပါဝင်ကာ ညီလာခံသက်တမ်းကို (၃) နှစ်တကြိမ် သတ်မှတ်ထားသည်။